Ahoana ny fomba filalaovana Super Mario Run | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba filalaovana Super Mario Run
Jose Alfocea | | Lalao IPhone
Taorian'ny telo volana niandrasana hatramin'ny nanambarana azy tamin'ny voalohan'ny volana septambra, Super Mario Run dia azo zahana amin'ny App Store ho an'ny iPhone sy iPad. Io no lalao Nintendo voalohany voalohany ho an'ny finday izay nanirian'ilay orinasa hamerina ilay fahatsorana tany am-boalohany, ary zazalahy nahomby ve izy ireo!
Tsy misy antony manosika ivelany Super Mario Run tsy mety ho tsotra kokoa. Ity dia lalao horonan-tsary amin'ny lafiny izay i Mario dia mihazakazaka hatrany amin'ny ankavanana ary tanana iray (raha ny tena izy, ny rantsan-tànana iray) no mila hilalao. Saingy na eo aza ny fahatsorany dia mila mampiofana sy mametraka ny fahaizanao paikady ianao. Manaraka izany dia holazainay aminao ny fomba filalaovana Super Mario Run ary ahazoana tombony betsaka amin'izany amin'ny € 9,99 izay vidiny amin'ny kinova feno.
1 Kitiho ny Super Mario Run
1.1 Maody lalao telo
1.2 Ahoana ny fomba hanombohana
1.3 Inona no maody mazoto maneran-tany?
1.4 Ahoana ny fomba filalaovana Super Mario Run
Kitiho ny Super Mario Run
En Super Mario Run, Princess Peach dia nanasa anao ho any amin'ny lapa mba hanao fety; dia mahandro mofomamy fa ny ratsy Bowser dia naka an-keriny ny mofomamy, efa ny andriambavy, mitokantokana ao amin'ny lapan'i Bowser izao, avy amin'izay tokony hanavotanao azy.
Maody lalao telo
Super Mario Run dia manana maody lalao telo izay, raha fintinina, dia miasa toy izao:.
En World Tour, hitsangatsangana hatrany amin'ny sehatra hafa ianao, hikapoka ireo mpampiasa ary hamely an'i Bowser amin'ny farany mba hanafahana ny Princess Peach.
En Famoriam-bahoaka, hifaninana amin'ireo mpilalao hafa an-tserasera ianao hahazoana ny fanajana ny saobakaka, tena ilaina hanatratrarana ny tanjonao, ary hanatevin-daharana ny fanjakanao.
En Fanjakana Builder, hampiasa ireo saobakaka ireo ianao mba "hananganana" ny fanjakanao.
Ahoana ny fomba hanombohana
Rehefa mandefa ny lalao voalohany, dia angatahina ianao hisafidy ny faritra misy anao sy midira na misoratra anarana amin'ny kaonty Nintendo. Tsy voatery izany, fa tokony ataonao izany satria afaka manampy anao hamerina mora foana ny isao ianao, milalao kilalao mini-irery ary manao izany amin'ny fomba multiplayer ihany koa. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny kaonty Google, Twitter na Facebook-nao. Raha vantany vao noforonina ny kaonty dia tsy maintsy manaiky ireo fepetra ireo ianao.
Avy eo a tutorial mifandraika izay hanazavana anao amin'ny antsipiriany ny fomba filalaovana Super Mario Run.
Inona no maody mazoto maneran-tany?
Ao amin'ny World Tour mode an'ny Super Mario Run, toy ny lalao kilasika, tsy maintsy atao izany Tongava amin'ny faran'ny ambaratonga hitsambikina eo ambonin'ny tsato-kazo alohan'ny faran'ny famantaranandroary. Eo no mihazakazaka mangalatra vola madinika i Mario, ary io no fomba andanianao ny ankamaroan'ny fotoananao, amin'ny fiezahana mibontsina sy manangona vola madinika.
World Tour dia misy Haavo 24 amin'ny tontolo 6 samihafa. Ireo singa mahazatra rehetra amin'ny tontolon'ny Super Mario (farantsakely, herinaratra, fahavalo sns) dia eto.
Rehefa misintona ny lalao ianao dia voafetra amin'ny ambaratonga vitsivitsy fotsiny amin'ny maody World Tour. Raha hamaha ny lalao feno dia tsy maintsy mandoa € 9,99 ianao ho toy ny fividianana ao anaty fampiharana.
Toy ny mpihazakazaka Mihazakazaka ho azy i MarioIzy io aza dia mitsambikina mihoatra ireo sakana kely sy fahavalo samirery. Ny sisa hataonao dia ny mitsambikina, mitsambikina ary mitsambikina. Mba hanaovana izany, kitiho fotsiny ny efijery; tazomy ny rantsan-tananao mba hitsambikina avo kokoa i Mario. Ary izany no lalao amin'ny ankapobeny.
Mazava ho azy, ny fitsambikinana dia tsy maintsy atao amin'ny fotoana mety. Isaky ny hanao tsara kokoa izy io fa noho ny singa maro be tafiditra ao, satria tsy mijanona mihazakazaka i Mario ary tsy afaka mifehy ny hafainganan'ny dia haingana dia mety ho lasa sarotra be ny lalao. Tokony hanao fitsambikinana lehibe ianao ary hahatratra ireo farantsakely, hitsambikina ny fahavalo hampiala azy ireo ... Mba hahazoana avo kokoa sy avo kokoa eo amin'ny tontolon'ny Super Mario, tsy maintsy mitsambikina eo anelanelan'ny rindrina ianao.
Rehefa mamoy ny ainao ianao dia miverina ao anaty baomba i Mario. Kitiho izay bubble ary avereno indray ny lalao.
Amin'ny faran'ny ambaratonga telo rehetra dia tsy maintsy miady amin'ny mpampiasa mahita ny fahalemeny ianao, na singa iray manodidina azonao ampiasaina hanohitra azy. Tsy mitovy amin'ny an'ny lehibe rehetra io.
Ny Super Mario Run dia mifototra amin'ny fahatsorana, saingy tsy lalao mora, mifanohitra amin'izay, ary tena mampiankin-doha. Mazava ho azy fa misy tsiambaratelo maro hafa miafina na amin'ny World Tour na amin'ny fomba hafa, Toad Rally ary ilay Kingdom Builder. Saingy tsy nandroso fatratra toy izany aho, ary tsy zava-mangidy koa ny hataon'ny mpankafy. Aza atsahatra intsony ny famakiako ahy ary ataovy rock Super Super Run.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ahoana ny fomba filalaovana Super Mario Run
Kari Soto dia hoy izy:
Raha vantany vao manokatra ny app aho dia mikatona ... Efa nanandrana nanangana ny iPhone indray aho ary nametraka ilay lalao fa tsy misy zavatra mety amiko 🙁
Valiny amin'i Kari Soto
Ren dia hoy izy:
Raha manana jailbreak ianao dia izay no antony, mila mametraka tweak ianao hialana amin'izany fiarovana izany.
Valiny tamin'i Ren
Araka ny lazain'i Ren, raha manana Jailbreak ianao, dia tsy hiasa ho anao ny Super Mario Run. Jereo amin'ity lahatsoratra iPhone News ity: https://www.actualidadiphone.com/como-jugar-a-super-mario-run-con-jailbreak/
'Mihazakazaka ho azy i Mario' Tsy hatoky ireo mpandika teny amin'ny Internet hanoratra tantara iray aho.
Iray hafa efa vonona. Na tsy nilalao na mitsikera amin'ny fitsikerana. Lazao ny tranonkala izay nandikanay ny lahatsoratra arakaraka anao.
Eny tokoa, "mihazakazaka ho azy i Mario", izany hoe, rehefa manomboka milalao ianao dia mihazakazaka ary mihazakazaka ary mihazakazaka i Mario, tsy azonao sakanana izany fa kitihina fotsiny ianao mba hitsambikinana. Toa tsy nanokatra ny lalao ve ianao?
Ralehilahy, mahafantatra fa amin'ny teny Anglisy 'mihazakazaka' dia midika hoe 'mihazakazaka' na mihazakazaka programa, ary mahita ny tantaran'ity tranonkala ity izay nisy hadisoana tamin'ny fandikan-teny nataonao tamin'ny fotoana hafa, dia tsy ho gaga mihitsy aho.
Ny fiantsoana ny saobakaka 'Toad' dia noho ny tsy nanokafako ny lalao akory, sa tsy izany? Amin'ny alika hafa manana io taolana io, ho ahy dia afaka manao izay tianao ianao, toro-hevitra fotsiny io…. Ianareo no mampiseho ny tenanao.
"Toad" dia teny anglisy izay midika hoe "toad" (misy diksionera momba an'io). "Toad" dia tsy anarana mety ary azo adika malalaka amin'ny teny espaniola. Ary na dia izany aza, dia azo adika hoe Sharon Stone (Sara Piedra) na Kevin Bacon (Kevin Bacino). Tahaka ny fandikanao ny "fihazakazahana", azonao atao koa ny mandika "toad", sa tsy izany? Na dia tsy nisy Super Mario Run aza, "Toad" dia mbola hadika hoe "toad", resaka fiteny izany fa tsy lalao. Fa na izany aza!
Tsy mila manazava ahy ianao ry namako… .izay afaka manao izay tianao ianao. Ary rahoviana, rehefa mahita lalao avy amin'ny Super Mario saga amin'ny Espaniôla ianao izay nandika ny teny hoe Toad (izay, raha ny marina, dia ny ANARANA toetra, na dia antsoina koa aza ny 'hazakazak'izy ireo), lazao aho .
Mandrosoa, manahoana ary manaova fialamboly amin'ny filalaovana Super Mario Run / Race / Run na izay tianao adika 😉
Horonantsary Apple Campus 2 vaovao. Nanomboka tamin'ny Jolay 2016 ka hatramin'izao raha jerena ny fiaramanidina